प्रचण्डलाई अर्को झट्का, हेलिकप्टरमै सुन्नपर्यो दु:खत खबर - jagritikhabar.com
प्रचण्डलाई अर्को झट्का, हेलिकप्टरमै सुन्नपर्यो दु:खत खबर
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नमिठो खबर सुन्न परेको छ। माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झाले नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि प्रचण्डलाई झट्का लागेको हो।
यो खबर सुन्दा प्रचण्ड डोल्पाबाट सुर्खेत हुँदै काठमाडौँ आउँदै थिए। हेलिकप्टरमा भएका बेलामा उनले दुःखद खबर सुनेका हुन्। उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने भएका छन्।
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि झा एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। मंसिर ७ गते धनुषामा झाको निर्वाचन क्षेत्रको तिनकोरिया चोकमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर माधवकुमार नेपालले पार्टीमा भित्र्याउने कार्यक्रम छ।
माओवादीका केन्द्रीय सदस्य झाले नेकपा एस प्रवेश गर्न लागेको पुष्टि गरे। उनले माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग औपचारिक रुपम बिदासमेत लिइसकेको जानकारी गराए।
माधव कमरेडसँग ३० वर्षसँगै काम गरेको हो। त्यो आफैले बनाएको घर हो नौलो कुरा होइन,’ झाले भने, ‘प्रचण्डजीसँग पनि औपचारिक रुपमा बिदावारी भइसकेको छु। अहिलेको लडाइँ केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति विरुद्धमा हो।
ओली प्रवृत्तिको विरोधी लडाइँमा प्रभावकारी भूमिका नेपालसँग गएर हुने उनले बताए। माओवादीको मनचित्त दुखाएर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न होइन,’ झाले भने।
झालाई एकीकृत समाजवादीमा उपाध्यक्ष बनाउने तयारी छ । झा प्रदेश २ मा प्रभाव भएको नेतामा पर्छन्। माओवादीले स्थायी कमिटी सदस्य नबनाएको भन्दै झा असन्तुष्ट थिए।
नेपालगन्जमा भएको एमालेको छैठौं महाधिवशनमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य भएका झा जनकपुर इन्चार्ज रहेका थिए। जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएका उनी एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि पोलिटब्युरो सदस्य भएका थिए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी स्थानीय विकासमन्त्री बनेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति गठन गर्दा झा उक्त पार्टीमा लागेका थिए। पछि फेरि माओवादीमा फर्केका थिए।
तेस्तै , प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको एर्पोटमै सातो खाएको खुलासा भएको छ। बेलायतबाट फर्कँदा फर्किँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलमै प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै गृहमन्त्री खाँडको खातो खाएको खुलासा भएको हो।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भनेर प्रचार गरिएका गृहमन्त्री खाँडलाई नमजाले झपारेको सुरक्षा श्रोतले जनाएको छ। कात्तिक १८ गते विहान प्रधानमन्त्री देउवाले विमानबाट उत्रनासाथ आफूलाई स्वागत गर्न पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भन्दै दशतिर किन घुमेको ?
कस्ले घुम्नु भन्यो ? त्यो डडेल्घुरा किन गएको ? भन्दै भेट्नासाथ झपारेका थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवासँग सल्लाह नगरी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भन्दै भनाउँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड देउवा नभएको मौकामा देश दौडाहामा निस्किएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले विमानबाट उत्रनासाथ आफूलाई स्वागत गर्न पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भन्दै दशतिर किन घुमेको ? कस्ले घुम्नु भन्यो ? त्यो डडेल्घुरा किन गएको ? भन्दै भेट्नासाथ आक्रोश पोखेका थिए।
त्यसमाथि पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सम्मुखमा राज्यको स्रोत साधन र संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै देश दौडाहामा निस्केर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको अर्थमा पनि खाडको गतिविधिलाई देउवाले बुझेका थिए।
खाँड आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिने प्रयासमा छन् र देउवानिकटका अरु नेताहरु पनि सोही पदका आकांक्षी छन्।आफ्नो समूहभित्र तालमेल मिलाउन नसकिरहेको अवस्थामा खाँडले आफूलाई जानकारी नै नदिई जिल्ला जिल्ला दौडाहामा गएकोमा देउवाले एयरपार्टमै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
यो कुरा पनि देउवालाई लण्डनमै सुनाइएको थियो। यी विविध कारण मिसिएकाले प्रधानमन्त्री देउवा वेलायतबाट उड्नुअघि नै खांडसंग असन्तुष्ट थिए । त्यही असन्तुष्टि विमानास्थलमा ओर्लनासाथ पोखिएको थियो।